Tahotra ny olona - anthropophobia, sosialy, tahotra ny fifandraisana, ahoana no hampijanonana ny tahotra ny olona sy ho menatra?
Tahotra olona - karazana anthropophobia ary ahoana no fomba hanafoanana izany?
Ny fahatsapana tahotra dia manjary manan-danja ary ampahany manan-danja amin'ny psyche olombelona. Ny tahotra vokatry ny loza, dia nahatonga ny fiainan'ny sidina sy voavonjy. Indraindray dia avy amin'ny tsy misy na aiza na aiza, ny "tsorakazo" amin'ny olona iray, dia mitombo mandritra ny fotoana toy ny ranomandry, mandrindra tanteraka ny tenany. Ny fahatahorana ny olona dia iray amin'ny tahotra tahaka izany, mandany ny sitrapo.
Iza no anaran'ny tahotra olona?
Ny tahotra dia manana anarana siantifika - anthropophobia, izay noforonina tamin'ny teny grika roa: ἄνθρωπος - lehilahy, φόβος - tahotra. Ny tahotra ny olona - ny endri-pahasalamana ara-tsosialy mifandraika amin'ny neuroses, ao amin'ny Directory Iraisam-pirenena momba ny fametrahana aretina, dia voatanisa eo ambanin'ny code F 40 - aretin'ny tebiteby. Nino i S. Sullivan, mpitsabo aretin-tsaina amerikanina, fa mba hahatakarana ny antony mahatonga ny tandroka, dia zava-dehibe ny "hamaha ny olana" ny fifandraisana misy eo amin'ny olona iray mijaly noho ny tahotra olona miaraka amin'ny manodidina azy.
Ny antony mahatonga ny anthropophobie:
Ny reny mangozohozo, ao anatin'ny toe-tsain'ny fanahiana sy ny tebiteby, dia manome ny heviny momba ny psyche an'ny zaza "mba hatahotra fa voajanahary!";
herisetra, fampijaliana amin'ny fahazazana;
fitokonana ara-tsosialy amin'ny fahazazana;
tarehin-tsoratra tsirairay (mampitombo ny ahiahy, fahalemena, ahiahy);
fanesoana amin'ny fahazazana sy ny adolantsento.
Tahotra ny olona - rongony
Ny fôbias rehetra dia misy karazana famantarana toy izany, izay mitranga amin'ny fisehoan-javatra eo amin'ny sehatry ny tahotra. Amin'izany, ny anthropophobia dia voafaritra ho isam-pirazanana maromaro (amin'ny ankapobeny, eo ho eo amin'ny 100 amin'izy ireo):
ohlofobiya (demophobia) - tahotra ny vahoaka vahoaka na ny fitohanan'ny vahoaka amin'ny toerana iray;
Ny fihofofôbia - ny fanorisorenan'ny olon-tsy fantatra dia mampihoron-koditra;
gomilofobiya - tahotra ny miresaka amin'ny vahiny;
ommatophobia - tahotra ny mijery maso;
Misy karazana anthropophobia ihany koa:
tahotra ny olona mendri-kaja;
tahotra mena sy marefo;
matahotra ny zokiolona;
tahotra ny olona avy amin'ny firenena iray;
Ny tahotra ho an'ireo mitafy volombava sy volombava na mifanohitra amin'izany dia madio-maina.
Ny marika famantarana ny tontolo iainana ara-sosialy sy ny fiovan'ny anthropophobie:
ny maha-izy azy ny olona ao aminy;
fomba fiainana tsotra;
Diso sy fahasorenana rehefa manakorontana ny tontolo anterotofoto.
Ny soritr'aretina ara-batana amin'ny anthropophobie:
mihorakoraka amin'ny vatana manontolo;
fanafihana ny fanafihana mahery vaika;
Tahotra olona marobe
Demophobia dia heverina kely fa misy aretina amin'ny tsy fahasalamana izay manasongadina ny tahotra olona marobe. Ny loharanon'io tahotra io dia mety ho fahatsiarovana ny fahazazana mifandraika amin'ny toe-javatra tsy mahafinaritra izay nitranga tamin'ny olona marobe. Ny tahotra ny fifamoivoizana ihany koa dia mety ho lasa olon-dehibe, rehefa misy asa fampihorohoroana any amin'ny toerana feno olona, ​​izay nitranga teo anoloan'ny olona iray, ady na vono olona, ​​dia mety ho toy ny fitaovana ho an'ny tahotra tsy matotra.
Tahotra ny hikasika olon-tsy fantatra
Ny tahotry ny olona dia samy hafa be fa tsy mazavazava hatrany ny môndra manasongadina izany na izany tahotra izany. Ny olona iray dia afaka mitombo ao amin'ny fianakaviana sambatra sy be fitiavana, saingy tsy manome antoka izany fa ho afaka amin'ny tahotra mitebiteby izy. Haptophobia - karazana anthropophobia tsy fahita firy, maneho ny tenany ho tahotra ny fifandraisana amin'ny olona manakaiky sy vahiny. Anarana hafa amin'ity tahotra ity:
Ny antony mahatonga ny haptophobie:
otisma spectrum spectrum;
Ny faniriana hipetrapetrahan'ny olona iray hiaro ny sehatra manokana;
fanararaotana ara-nofo amin'ny fotoana rehetra;
ny fahavetavetana amin'ny toetran'ny olona;
Misophobia (tahotra ny manimba ny vava amin'ny tanana).
Fanehoan-kevitra momba ny haptophobia:
Esory ny fehin-tanana (fihirana, fangejana, oroka);
Ny vehivavy sy ny lehilahy izay tafavoaka velona amin'ny herisetra dia tsy afaka manohina ny olona iray amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo;
dia mahatsapa fihetseham-po faran'izay ratsy rehefa miezaka hikasika azy ireo;
Araka ny filazalazana ny haptophobes, dia misy ny antony mahatonga azy ireo hibaribary na maratra tokoa.
Tahotra fifampiresahana amin'ny olona
Ny tahotra ny fifaneraserana ara-tsosialy dia ahitana ny traikefa ara-tsosialy rehetra. Ny olona iray sosialy dia matahotra ny zava-drehetra mifandray amin'ny olon-kafa. Ny tahotra fifampiresahana amin'ny olona dia niforona nandritra ny fahazazana noho ny fifampiraharahana tsy nahomby tamin'ny namana, nandritra ny fisehoan'ny besinimaro, izay niafara tamin'ny tsy fahombiazana, izany rehetra izany dia mamela ny mombamomba ny psyche ho an'ny ankizy ka mahatonga azy ho azo iainana sociopath sy ny tsy fahasalamana ho avy.
Tahotra ny mijery olona amin'ny maso
Ny tahotra ny olona sy ny fiarahamonina dia azo atrehina amin'ny tahotra toy izany, toy ny ommatophobia - tahotra ny maso. Ity teratany hafahafa sy mahazatra ity dia miseho amin'ny tahotra ny mijery ny mpanelanelana ary rehefa mandinika sy mandinika tsara ny anthropophobe ny mpikaroka. Ny fiheveran'ny olon-kafa dia heverina ho herisetra sy fanakanana ao amin'ny sehatra manokana, izay miteraka fahanginana sy tahotra. Ny karazana tahotra amin'ny maso "ratsy" dia karazana ommatophobia, ny olona iray matahotra fa ho jinxed na babo izy.
Tahotra ny miresaka amin'ny olona
Ny Homilophobia - ny tahotra ny olona amin'ny toe-javatra mampidi-doza, noho ny fanamarihana diso. Ny tahotra ny miresaka amin'ny olona dia mety ho vokatry ny tahotra amin'ny fisalasalana na ny fisarihana ny saina. Ny olona mora tratran'ny gomilophobia dia mahatsapa fanahiana sy fientanentanana mafy, eny fa na dia tsy maintsy mametraka fanontaniana tsotra, ohatra, ny fangatahana toro-lalana - heveriny fa heverina ho mahatsikaiky sy mahatsikaiky izy. Ny mekanika ny fiandohan'ny gomilophobia dia tsy takatra tanteraka.
Tahotra ny vahiny
Ity phobia ity dia manana ny toetry ny taranaky ny olona rehetra eto an-tany. Ny hafanam-po - ao amin'ny sasany dia voambara amin'ny version hipertrophies: fankahalana ny vondrona foko hafa, olona tsy dia nandia fianarana. Amin'ny fisehoan-dresaka mahazatra dia matahotra ny olona matahotra ny fiarahamonina iray tsy fantany ny olona iray ary matahotra ny rehetra izay tsy anisan'ny fianakaviany. Matetika dia olana goavana ho an'ny olona io ary mitarika ny fitokonana ara-piaraha-monina sy ny fahaverezan'ny fiarahamonina.
Ahoana no hanafoanana ny phobia sosialy?
Ny fitantanana ny fôbias dia tsy azo atao raha tsy misy olona mahatsapa fa manana olana izy. Ao anatin'ireo fiarahamonina sôsialy dia misy maro izay mahatsikaritra tampoka ny marina ary mahatsapa fa diso fanantenana izy ireo ary mahatsapa fa misy fanontaniana: inona no tokony hatao ary ahoana no hampijanonana ny tahotra olona? Raha tsy misy fotoana ahafahana mitsidika manam-pahaizana manokana iray, dia azonao atao ny manaraka ireto fanoloran-kevitra manaraka ireto ny fomba hisorohana ny tahotra olona sy ho saro-kenatra:
mba hahitana ny antony - hanampiana ny mahita ny fisisihana ny tahotra sy ny traikefa tsy dia mety ho lasa olana amin'ny fiainana rehetra;
asa miavaka amin'ny eritreritra ratsy - fanoloana azy ireo amin'ny tsara;
Manajà ny tahotra;
mba hampivelatra fihetsika vaovao (hanomboka dingana kely amin'ny torolalana amin'ny tahotra, fa tsy ny fihetsika mahazatra amin'ny fiaramanidina).
Anthropophobia - fitsaboana
Amin'ny tranga goavana, rehefa manonofinofy ny eritreritry ny fisalasalana ny olona iray - ahoana no handresena ny rongony ara-tsôsialy? Ny tahotry ny olona - dia manondro aretim-pangoromporana mahatsiravina, noho izany dia entina toy ny neurôs rehetra izy . Ny fitsaboana amin'ny fitsaboana dia mifototra amin'ny fitsaboana marary maromaro:
sedatify (Validol, Novo-Passit);
Antidepressants (Giperecin, zava-mahadomelina mifototra amin'ny karazana St. John);
tranombila (Afobazol, Phenazepam).
Ny fitsaboana amin'ny fitsaboana ny anthropophobia dia niasa tsara tany amin'ireto sehatra manaraka ireto:
Ny fikasan-kevitra mifanohitra - ny fototry ny fomba iray dia ny manandrana maniry izay tian'ny olona atahorany, mba hampatahotra ny tsiambaratelo.
Ny fitsaboana amin'ny taranja kognitivan'ny tarika dia fomba iray amin'ny fisainana ara-pitaovana, izay mihena tsikelikely ny fahatsapana ara-pihetseham-po amin'ny zavatra izay miteraka tahotra.
Inona no dikan'ny hoe manosika ny olona - nahoana ny olona no miteraka?
Expat - iza io ary inona no fahasamihafana misy eo amin'ny vahiny sy ny vahiny?
Famantarana ny fiankinan-doha
Fanatanjahana ho an'ny feo
Spirituality ny olombelona
Sakafo tsara tarehy miaraka amin'ny burger
Voanio coho ao an-trano
Ny Tilikambon'i Davida
Kaomandin'ny kilaoty ho an'ny rambony sy ny tendany
Burdock menaka amin'ny fitomboan'ny volo
Ny fanaintainana amin'ny anus amin'ny vehivavy - ny antony
Ahoana no hampitomboana hazo vola?
Mamboly vary amin'ny kefir
Prince William sy Harry dia nanambara ny fananganana tsangambato ho an'ny reniny
Inona no homena jiolahy?
Ahoana no hitehirizana tsimoka ao an-trano?
Ivanka Trump sy Jared Kushner niaraka tamin'ny ankizy dia nankalaza ny fiandohan'ny Chanukah tao an-trano
Fitaovana paraky any an-trano